Karaiba: Fahatsiarovana An’i Alton Ellis · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2017 2:47 GMT
“Alton Ellis”, sary avy amin'i Eric Oliviera, nahazoana alàlana . Tsidiho ny kaontin'i Eric Oliviera flickr.
Maty noho ny homamiadana tamin'ny 10 Oktobra 2008 i Alton Ellis, mpiangaly mozika Jamaikana izay nitari-dalana ny rocksteady tany amin'ny taompolo 60. Araka ny nanamarihan'ny Jamaica Gleaner azy, na dia tsy mbola nanana laza iraisam-pirenena loatra aza i Ellis ary tsy toy ireo mpiara-belona taminy sasany tahaka an'i Bob Marley na i Jimmy Cliff dia nanan-danja tokoa ity “raiben'ny rocksteady” ity ho an'ireo taranaka mpiangaly mozika jamaikana taty aoriana, ary efa hatry ny ela izy no nalaza teo amin'ny sehatry ny mozika Jamaikana.
Nanome voninahitra ny talentany, ny feony, ary ny maha-izy azy manokana ny vondrom-piarahamonin'ny mpiangaly mozika tao Jamaika rehefa niparitaka ny vaovaon'ny fahafatesany. Maro ihany koa ireo fanomezam-boninahitra no navoaka tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Karibeana. “Very mpitari-dalana goavana isika“, hoy i Geoffrey Philp mpitsikera literatiora.
Manolotra rohy mankany amin'ny lahatsary ao amin'ny YouTube mampiseho an'i Ellis mihira ny iray amin'ireo hirany malaza,”I'm Still in Love” i Philp . Afrobella ihany koa dia nandray anjara tamin'ny tahirin-tsarin'i YouTube, niaraka tamin'ny lahatsarin-kiran'i Alton Ellis mihira ilay hoe “I'm Just a Guy” sy “Girl I've Got a Date” . Hoy izy
Nandefa hafatra tao amin'ny tolotra famahanana bilaogy madinika sy tao amin'ny famelan-kafatra Twitter ihany koa i Afrobella ho an'ny mpankafy ny mozika Jamaikana amin'izao fotoana izao:
Nanampy i Lowrie-Chin Post hoe “Nampisy tsirony ny fiainantsika tamin'ny alalan'ny tononkirany mahafinaritra sy ny feony i Alton Ellis.” Nanamarika ny Antilles, bilaogin'ny boky ara-literatiora Caribbean Review of Books, sady nanome ny rohy mankany amin'ny fanambarana ny fahafatesan'i Alton Ellis tao amin'ny tranonkalan'ny Trojan Records, fa nisy ny tsy fitovian-kevitra momba ny daty nahaterahany. Nitatitra ny YardFlex fa nisy resaka tsaho momba ny handevenana an'i Jason Ellis amin'ny fomba manetriketrika manerana ny firenena.
Namoaka hafatra tsotra ho fanomezam-boninahitra azy ny Stunner's Afflictions. “Nanana ny hery hambaboana ny mpihaino azy i Alton Ellis, na io antitra na tanora, tao anatin'ny mozikany mankahery”, hoy izy nanoratra. “Iray tamin'ireo mpihira nankafizin'ny vahoaka indrindra izy… Ho tsaroana hatrany am-pitiavana ity olo-malazan'ny mozika Jamaikana ity”.